မြေရှားသတ္တုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ - အပိုင်း (၃) မြန်မာ့မြေရှား အလားအလာ
၀၃ မတ်၊ ၂၀၂၂
Rare earth oxides from top center clockwise: praseodymium, cerium, lanthanum, neodymium, samarium, and gadoliniun
ကမ္ဘာ့မြေရှားထုတ်လုပ်မှု တတိယလိုက်နေတဲ့ မြန်မာအတွက် မြေရှားအလားအလာကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့မြေရှားသတ္တုထုတ်လုပ်မှု မက်ထရစ်တန်ချိန် ၂ သိန်း ၄ သောင်းအထိ (MT 240,000) တိုးလာနေချိန်မှာ တန်ချိန် ၁ သိန်း ၄ သောင်း (MT 140,000) ထုတ်နေတဲ့ တရုတ် နဲ့ တန်ချိန် ၃ သောင်း ၈ ထောင်ထုတ်တဲ့ အမေရိကန် (MT 38,000) ပြီးရင် ပန်ဝါ (MT 30,000) က တန်ချိန် ၃ သောင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့တတိယအများဆုံး မြေရှားထွက်ဒေသဖြစ်နေပါတယ်။ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ မြေရှားကုန်ကြမ်း ထက်ဝက်ကလည်း မြန်မာဆီက ရတာပါ။
လက်ရှိမှာ မြေရှားထုတ်လုပ်မှု တရားဝင်မရှိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေရှားအလားအလာကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ မြေရှားသတ္တုက ဘာကြောင့် အရေးပါနေတာပါလဲ။ ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေးနဲ့ တူးဖေါ်ရေးပညာရှင် ဦးစောနောင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
မေး။. ။“မြေရှားသတ္တုက မြန်မာနိုင်ငံ ပန်ဝါဒေသမှာပဲ ရှိတာလားဆရာ။ တခြား နေရာတွေမှာရော မြေရှားသတ္တုတွေ ရှိပါလား”
ဦးစောနောင်။. ။“အခု လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီကချင်မှာတော့ အများဆုံးပဲ။ နောက်ပြီးရင် အခု ကချင်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရကတော့ ဒီကချင်ထဲမှာကို လုပ်ကွက်ပေါင်း ၁၀၀ လောက်ရှိနေတယ်။ မြေရှားလုပ်ကွက်ပေါ့နော်။ လုပ်ကွက်တွေ ၁၀၀ ကျော် ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ရှိနေပြီလို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာ တခြားနေရာတွေ အနေနဲ့ဆိုရင် အင်းတော်နဲ့၊ အင်းတော်နဲ့ကသာကြားမှာပဲ တချို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သိရတယ်။
နောက်ပြီးရင် ကျနော်တို့ DGSE (Department of Geological Survey and Mineral Exploration) ဘူမိဗေဒနဲ့ ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေး (ဘ ဓ ရ) မှာ လုပ်တာ၊ ဒီ regional mapping ဒေသဆိုင်ရာ ဘူမိမြေပုံ ထုတ်ဖို့ ကွင်းဆင်းတုန်းက ဒီ တနင်္သာရီ အထူးသဖြင့် ထားဝယ်က လောင်းလုံး beach မှာတော့ marine placer တွေ မရိန်းပလေစာ သိုက်ပေါ့။ လောင်းလုံးကမ်းခြေမှာတော့ ဒီ မြေရှား rare earth တွေ ရဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မလေ့လာရဘူးလေ။ trace အနေနဲ့သာ တွေ့တာပေါ့။
မေး။. ။“အနည်းအကျဉ်း ပါတာမျိုးပေါ့။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်တယ်။ အနည်းအကျဉ်းပါတယ်၊၊ ဟုတ်တယ်။ ဒီ Monazite တို့ Xenotime (မြေရှား တွင်းထွက်) တွေ တွေ့ရတယ်။”
မေး။. ။“မြန်မာနိုင်ငံက မြေရှားသတ္တု အလားအလာလေး ပြောပြပေးပါ။
ဦးစောနောင်။. ။“မြေရှားသတ္တု အလားအလာ အနေနဲ့ ကတော့ ဒီကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အယ်လ်ကာလီ ဂရင်းနိုက် Alkali Granite လို ကျောက်မျိုးကို လိုက်ရှာပြီး ဖေါ်ထုတ်ရမှာပဲလေ။ ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဌာနဆိုင်ရာတွေ အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာက မီးသင့်ကျောက် belt တွေ ရှိတယ်လေ။ ဒီ belt တွေမှာ လိုက်ရှာရမှာပဲ။ ဒါက ကချင်မှ မဟုတ်ဖူး တခြားနေရာတွေမှာလည်း ရှိတယ်။ တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတွေ မှာလည်း အယ်လ်ကာလီကြွယ်တဲ့ မီးသင့်ကျောက်တွေ ရှိတာပဲ။ လောင်းလုံး ဆိုရင် သူ့ဘက်ခြမ်းက coastal igneous rocks - ကမ်းရိုးတန်းက မီးသင့်ကျောက်တွေက တချို့က အယ်လ်ကာလီ ကြွယ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီ လောင်းလုံး beach မှာ ဒီလိုမျိုး trace တွေ တွေ့တယ် ထင်တာပဲ။ ကျနော်တို့ ရှာမယ် ဆိုရင်တော့ အယ်လ်ကာလီကြွယ်တဲ့ မီးသင့်ကျောက်တွေ ရှိတဲ့ ဒေသတွေကို လိုက်ပြီး ကွင်းဆင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဟိုးတုန်းကလိုမျိုး၊ ကျနော်တို့ ၁၉ ၇၄ ကနေ ၁၉ ၇၈ တုန်းက GSE ပရောဂျက်နဲ့ လုပ်တာမျိုး၊ အင်အားများများနဲ့ သုံးပြီးငွေသုံးရှာရင်တော့ တွေ့မယ် ထင်တာပဲ။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သေချာ စံနစ်တကျနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့ မရှိသေးဘူး ထင်တယ်နော်။”
ဦးစောနောင်။. ။“အခုထိတော့ ဒီလိုမျိုးစံနစ်တကျနဲ့ မရှိသေးဘူး။ တင်တော့ တင်ထားတယ်။ မြေပုံထဲမှာ - ဒီ mineral resources of Burma မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တွင်းထွက်တွေကို ပြတဲ့ မြေပုံ ထဲမှာပေါ့။ အဲဒီမှာတော့ မြေရှားသတ္တု rare earths ဆိုပြီး အနေနဲ့တင်ထားတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တခု နှစ်ခုလောက်ပဲ တွေ့ရတာ။”
မေး။ ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရတဲ့ မြေရှားသတ္တုတွေက ဘယ်နှစ်မျိုးလောက် ရှိပါလဲ”
ဦးစောနောင်။ ။“ဒီ rare earth တွေက အခု ပန်ဝါမှာ ထွက်တာကတော့ - ဒီ မြေရှားမှာ ၂ ခု ခွဲထားတယ်လေ။ heavy rare earth နဲ့ ဒီ light rare earth လေးတဲ့မြေရှားနဲ့ ပေါ့တဲ့မြေရှားပေါ့။ ပန်ဝါမှာ တွေ့တာက လေးတဲ့ မြေရှားတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီ လေးတဲ့ မြေရှားတွေက ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးကြီးတယ်။ ဈေးပိုရတာပေါ့။ ပန်ဝါမှာ ထွက်တာက တာဘီယန် Terbium (TB) နဲ့ Disprosium(Dy) တွေပဲ။ ဒါက လေးတဲ့မြေရှားတွေပါ။”
မေး။. ။“မြေရှားသတ္တု ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အဖိုးတန်တာ ဘာတွေ ရပါလဲဆရာ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီမြေရှားသတ္တုထုတ်တဲ့ နေရာ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ တကျောမှာ ရွှေမရှိတဲ့နေရာက မရှိသလောက်ပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ ရွှေကို တွေ့နေရတယ်။ ဒီနေရာ တွေမှာရော ရွှေထုတ်တာတွေ ရှိသလား။ အခြေနေလေးနဲနဲ ပြောပြပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ဒီမြေရှားကို ဖမ်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ waste အမှိုက်တွေထဲကနေ သူတို့က မြန်မာတွေကတော့ ထပ်ဆေးတာပေါ့။ ထပ်ဆေးတော့ ရွှေတွေလည်း ရတယ်။ ကျောက်တွေလည်း ရတယ်။ အဲဒါကတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျနော့်မိတ်ဆွေ ဒါလုပ်နေတဲ့ ကချင်တွေဆီကနေ သိရတာပါ။”
မေး။. ။“မြေရှားသတ္တုကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အဓိက သုံးပါသလဲဆရာ။ မြေရှားသတ္တု အသုံးပြုပုံ လေး ပြောပြပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ၁၉ ၆၅ မတိုင်ခင် အထိက မြေရှားသတ္တုက လိုအပ်ချက် အတော်ပဲ နည်းသေးတယ်။ ဒီ ၁၉ ၆၅ မှာ ဈေးကွက်ကို ရောက်လာတဲ့၊ ကာလာတီဗီ စက်တွေနဲ့အတူ မြေရှားလိုအပ်ချက်က မြင့်မားလာတာပေါ့။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ဒီကာလာတီဗီစက်မှာ သုံးတဲ့ Europium (Eu) ယူရိုပီယမ် မြေရှား mineral က ဒီ ကာလာတီဗီ စက်မှာသုံးဖို့အတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဒြပ်စင် တခုအဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုတာတော့ ဒါ တော်တော်များတယ်လေ။ တော်တော်များတော့ နောက် တောက်လျှောက်က မြေရှားက ကမ္ဘာမှာ လိုအပ်ချက် ကြီးမားနေတာပေါ့။ နည်းသွားတာ မရှိဘူး။ များသွားဖို့ တိုးလာဖို့ပဲ ရှိတယ်။ Neodymium (Nd) နဲ့ Samarium (Sm) မြေရှားနဲ့ တခြားသတ္တုနဲ့ စပ်ပြီးရင် Strong Magnet ဒီ စွမ်းအားမြင့် သံလိုက်ပေါ့နော်၊ သူက အပူကို တော်တော်ခံနိုင်တဲ့ သံလိုက်မျိုး လုပ်ရာမှာ သုံးတယ် ။ နောက် လျှပ်စစ်ကားအင်ဂျင် လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်၊ လေအားလျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ hard disc တို့ ဆဲလ် ဖုံးတို့ အဲတာတွေ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက်တမျိုး ပြောရရင်တော့ Disprosium(Dy) မြေရှားရယ်၊ Terbium (TB) မြေရှားရယ် ဒီ ၂မျိုးကတော့ ပန်ဝါမှာ ထွက်တဲ့ မြေရှား။ ဒီသတ္တုစပ်တွေကတော့ ဂျက် တိုက်လေယာဥ်လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက် လျှပ်စစ်ကားတွေမှာ သုံးတယ်။ နောက်ကျန်တာတွေ ကတော့ ပြောမယ်ဆိုရင် ဟို ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အထောက်အကူ ပစ္စည်းတွေ၊ ဓါတ်ကူပစ္စည်းတွေ ၊ နျူကလီယား ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ ၊ အာကာသ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ စွမ်းအားမြင့် သံလိုက်တွေ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တို့ ရေငုပ်သင်္ဘောတို့ ဒီလိုမျိုး စစ်ရေးရာမှာလည်း သုံးတာပေါ့။ နောက်ပြီးရင် လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ရာမှာလည်း သုံးတယ် ။ လျှပ်စစ်ကားတွေမှာလည်း သုံးတယ် ဆိုတော့ သူက အသုံးပြုတာကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြေရှားက အမြဲပဲ လိုအပ်နေမှာပဲ။”
မေး။. ။“ဆရာ ဒီပန်ဝါမှာ တွေ့တဲ့ အမျိုးအစားက အဓိက ဘာသုံးတာပါလည်း။”
ဦးစောနောင်။. ။“ပန်ဝါမှာ တွေ့တဲ့ အမျိုးအစားကတော့ ဂျက်တိုက်လေယာဉ် လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ နောက် လျှပ်စစ်ကားတွေ ထုတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတယ်။ အဓိက ကတော့။ နောက်ပြီး လေအား လျှပ်စစ်လုပ်ရာမှာလည် သုံးတယ်။ ပန်ဝါက သူက လေးတဲ့မြေရှား ဆိုတော့ သူက တန်ဖိုးလည်း ကြီးတယ်။”
ကမ်ဘာ့မွရှေားထုတျလုပျမှု တတိယလိုကျနတေဲ့ မွနျမာအတှကျ မွရှေားအလားအလာကို ကွညျ့ရအောငျပါ။
၂၀၂၀ ကမ်ဘာ့မွရှေားသတ်တုထုတျလုပျမှု မကျထရဈတနျခြိနျ ၂ သိနျး ၄ သောငျးအထိ (MT 240,000) တိုးလာနခြေိနျမှာ တနျခြိနျ ၁ သိနျး ၄ သောငျး (MT 140,000) ထုတျနတေဲ့ တရုတျ နဲ့ တနျခြိနျ ၃ သောငျး ၈ ထောငျထုတျတဲ့ အမရေိကနျ (MT 38,000) ပွီးရငျ ပနျဝါ (MT 30,000) က တနျခြိနျ ၃ သောငျးနဲ့ ကမ်ဘာ့တတိယအမြားဆုံး မွရှေားထှကျဒသေဖွဈနပေါတယျ။ တရုတျကထုတျတဲ့ မွရှေားကုနျကွမျး ထကျဝကျကလညျး မွနျမာဆီက ရတာပါ။
လကျရှိမှာ မွရှေားထုတျလုပျမှု တရားဝငျမရှိသေးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မွရှေားအလားအလာကဘယျလိုရှိပါသလဲ။ မွရှေားသတ်တုက ဘာကွောငျ့ အရေးပါနတောပါလဲ။ ဓါတျသတ်တုရှာဖှရေေးနဲ့ တူးဖျေါရေးပညာရှငျ ဦးစောနောငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
မေး။. ။“မွရှေားသတ်တုက မွနျမာနိုငျငံ ပနျဝါဒသေမှာပဲ ရှိတာလားဆရာ။ တခွား နရောတှမှောရော မွရှေားသတ်တုတှေ ရှိပါလား”
ဦးစောနောငျ။. ။“အခု လောလောဆယျမှာတော့ ဒီကခငျြမှာတော့ အမြားဆုံးပဲ။ နောကျပွီးရငျ အခု ကခငျြပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့ရဲ့ အဆိုအရကတော့ ဒီကခငျြထဲမှာကို လုပျကှကျပေါငျး ၁၀၀ လောကျရှိနတေယျ။ မွရှေားလုပျကှကျပေါ့နျော။ လုပျကှကျတှေ ၁၀၀ ကြျော ၁၀၀ ဝနျးကငျြလောကျ ရှိနပွေီလို့ ဆိုတယျ။ ဒီတော့ မွနျမာပွညျမှာ တခွားနရောတှေ အနနေဲ့ဆိုရငျ အငျးတျောနဲ့၊ အငျးတျောနဲ့ကသာကွားမှာပဲ တခြို့ လုပျနတေယျ ဆိုတာ သိရတယျ။
နောကျပွီးရငျ ကနြျောတို့ DGSE (Department of Geological Survey and Mineral Exploration) ဘူမိဗဒေနဲ့ ဓါတျသတ်တုရှာဖှရေေး (ဘ ဓ ရ) မှာ လုပျတာ၊ ဒီ regional mapping ဒသေဆိုငျရာ ဘူမိမွပေုံ ထုတျဖို့ ကှငျးဆငျးတုနျးက ဒီ တနင်ျသာရီ အထူးသဖွငျ့ ထားဝယျက လောငျးလုံး beach မှာတော့ marine placer တှေ မရိနျးပလစော သိုကျပေါ့။ လောငျးလုံးကမျးခွမှောတော့ ဒီ မွရှေား rare earth တှေ ရဘူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကတော့ ကနြျောတို့ မလလေ့ာရဘူးလေ။ trace အနနေဲ့သာ တှတေ့ာပေါ့။
မေး။. ။“အနညျးအကဉျြး ပါတာမြိုးပေါ့။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျတယျ။ အနညျးအကဉျြးပါတယျ၊၊ ဟုတျတယျ။ ဒီ Monazite တို့ Xenotime (မွရှေား တှငျးထှကျ) တှေ တှရေ့တယျ။”
မေး။. ။“မွနျမာနိုငျငံက မွရှေားသတ်တု အလားအလာလေး ပွောပွပေးပါ။
ဦးစောနောငျ။. ။“မွရှေားသတ်တု အလားအလာ အနနေဲ့ ကတော့ ဒီကခငျြပွညျနယျထဲမှာ လုပျမယျ ဆိုရငျတော့ အယျလျကာလီ ဂရငျးနိုကျ Alkali Granite လို ကြောကျမြိုးကို လိုကျရှာပွီး ဖျေါထုတျရမှာပဲလေ။ ပညာရှငျတှေ အနနေဲ့ ဒါမှမဟုတျရငျ ဌာနဆိုငျရာတှေ အနနေဲ့လုပျမယျဆိုရငျ မွနျမာပွညျမှာက မီးသငျ့ကြောကျ belt တှေ ရှိတယျလေ။ ဒီ belt တှမှော လိုကျရှာရမှာပဲ။ ဒါက ကခငျြမှ မဟုတျဖူး တခွားနရောတှမှောလညျး ရှိတယျ။ တနင်ျသာရီ ကမျးရိုးတနျးတှေ မှာလညျး အယျလျကာလီကွှယျတဲ့ မီးသငျ့ကြောကျတှေ ရှိတာပဲ။ လောငျးလုံး ဆိုရငျ သူ့ဘကျခွမျးက coastal igneous rocks - ကမျးရိုးတနျးက မီးသငျ့ကြောကျတှကေ တခြို့က အယျလျကာလီ ကွှယျတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီ လောငျးလုံး beach မှာ ဒီလိုမြိုး trace တှေ တှတေ့ယျ ထငျတာပဲ။ ကနြျောတို့ ရှာမယျ ဆိုရငျတော့ အယျလျကာလီကွှယျတဲ့ မီးသငျ့ကြောကျတှေ ရှိတဲ့ ဒသေတှကေို လိုကျပွီး ကှငျးဆငျးဖို့ လိုပါတယျ။ ဟိုးတုနျးကလိုမြိုး၊ ကနြျောတို့ ၁၉ ၇၄ ကနေ ၁၉ ၇၈ တုနျးက GSE ပရောဂကျြနဲ့ လုပျတာမြိုး၊ အငျအားမြားမြားနဲ့ သုံးပွီးငှသေုံးရှာရငျတော့ တှမေ့ယျ ထငျတာပဲ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ သခြော စံနဈတကနြဲ့ မှတျတမျးတငျထားတာတော့ မရှိသေးဘူး ထငျတယျနျော။”
ဦးစောနောငျ။. ။“အခုထိတော့ ဒီလိုမြိုးစံနဈတကနြဲ့ မရှိသေးဘူး။ တငျတော့ တငျထားတယျ။ မွပေုံထဲမှာ - ဒီ mineral resources of Burma မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တှငျးထှကျတှကေို ပွတဲ့ မွပေုံ ထဲမှာပေါ့။ အဲဒီမှာတော့ မွရှေားသတ်တု rare earths ဆိုပွီး အနနေဲ့တငျထားတာ ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခု နှဈခုလောကျပဲ တှရေ့တာ။”
မေး။ ။“ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာ ဒီ မွနျမာနိုငျငံမှာ တှရေ့တဲ့ မွရှေားသတ်တုတှကေ ဘယျနှဈမြိုးလောကျ ရှိပါလဲ”
ဦးစောနောငျ။ ။“ဒီ rare earth တှကေ အခု ပနျဝါမှာ ထှကျတာကတော့ - ဒီ မွရှေားမှာ ၂ ခု ခှဲထားတယျလေ။ heavy rare earth နဲ့ ဒီ light rare earth လေးတဲ့မွရှေားနဲ့ ပေါ့တဲ့မွရှေားပေါ့။ ပနျဝါမှာ တှတေ့ာက လေးတဲ့ မွရှေားတှေ ဖွဈတယျ။ ဒီ လေးတဲ့ မွရှေားတှကေ ပိုပွီးတော့ တနျဖိုးကွီးတယျ။ ဈေးပိုရတာပေါ့။ ပနျဝါမှာ ထှကျတာက တာဘီယနျ Terbium (TB) နဲ့ Disprosium(Dy) တှပေဲ။ ဒါက လေးတဲ့မွရှေားတှပေါ။”
မေး။. ။“မွရှေားသတ်တု ထုတျတဲ့နရောမှာ ဘေးထှကျပစ်စညျးတှနေဲ့ အဖိုးတနျတာ ဘာတှေ ရပါလဲဆရာ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ဒီမွရှေားသတ်တုထုတျတဲ့ နရော အပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံ တကြောမှာ ရှမေရှိတဲ့နရောက မရှိသလောကျပဲ။ နရောတိုငျးမှာ ရှကေို တှနေ့ရေတယျ။ ဒီနရော တှမှောရော ရှထေုတျတာတှေ ရှိသလား။ အခွနေလေေးနဲနဲ ပွောပွပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့။ ဒီမွရှေားကို ဖမျးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ ကနျြတဲ့ waste အမှိုကျတှထေဲကနေ သူတို့က မွနျမာတှကေတော့ ထပျဆေးတာပေါ့။ ထပျဆေးတော့ ရှတှေလေညျး ရတယျ။ ကြောကျတှလေညျး ရတယျ။ အဲဒါကတော့ အသအေခြာပါပဲ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ကနြေျာ့မိတျဆှေ ဒါလုပျနတေဲ့ ကခငျြတှဆေီကနေ သိရတာပါ။”
မေး။. ။“မွရှေားသတ်တုကို ဘယျနရောတှမှော အဓိက သုံးပါသလဲဆရာ။ မွရှေားသတ်တု အသုံးပွုပုံ လေး ပွောပွပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့။ ၁၉ ၆၅ မတိုငျခငျ အထိက မွရှေားသတ်တုက လိုအပျခကျြ အတျောပဲ နညျးသေးတယျ။ ဒီ ၁၉ ၆၅ မှာ ဈေးကှကျကို ရောကျလာတဲ့၊ ကာလာတီဗီ စကျတှနေဲ့အတူ မွရှေားလိုအပျခကျြက မွငျ့မားလာတာပေါ့။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုရငျ ဒီကာလာတီဗီစကျမှာ သုံးတဲ့ Europium (Eu) ယူရိုပီယမျ မွရှေား mineral က ဒီ ကာလာတီဗီ စကျမှာသုံးဖို့အတှကျမရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ ဒွပျစငျ တခုအဖွဈနဲ့ အသုံးပွုတာတော့ ဒါ တျောတျောမြားတယျလေ။ တျောတျောမြားတော့ နောကျ တောကျလေြှာကျက မွရှေားက ကမ်ဘာမှာ လိုအပျခကျြ ကွီးမားနတောပေါ့။ နညျးသှားတာ မရှိဘူး။ မြားသှားဖို့ တိုးလာဖို့ပဲ ရှိတယျ။ Neodymium (Nd) နဲ့ Samarium (Sm) မွရှေားနဲ့ တခွားသတ်တုနဲ့ စပျပွီးရငျ Strong Magnet ဒီ စှမျးအားမွငျ့ သံလိုကျပေါ့နျော၊ သူက အပူကို တျောတျောခံနိုငျတဲ့ သံလိုကျမြိုး လုပျရာမှာ သုံးတယျ ။ နောကျ လြှပျစဈကားအငျဂငျြ လုပျရာမှာ သုံးတယျ၊ လအေားလြှပျစဈ ဂငျြနရတော လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျပွီးတော့ hard disc တို့ ဆဲလျ ဖုံးတို့ အဲတာတှေ လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျတမြိုး ပွောရရငျတော့ Disprosium(Dy) မွရှေားရယျ၊ Terbium (TB) မွရှေားရယျ ဒီ ၂မြိုးကတော့ ပနျဝါမှာ ထှကျတဲ့ မွရှေား။ ဒီသတ်တုစပျတှကေတော့ ဂကျြ တိုကျလယောဥျလုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျ လြှပျစဈကားတှမှော သုံးတယျ။ နောကျကနျြတာတှေ ကတော့ ပွောမယျဆိုရငျ ဟို ခှဲစိတျခနျးသုံး အထောကျအကူ ပစ်စညျးတှေ၊ ဓါတျကူပစ်စညျးတှေ ၊ နြူကလီယား ရငေုပျသင်ျဘောတှေ ၊ အာကာသ ဆိုငျရာ ပစ်စညျးမြား လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျ အီလကျထရောနဈ ပစ်စညျးတှေ လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ စှမျးအားမွငျ့ သံလိုကျတှေ လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျ ဂကျြတိုကျလယောဉျတို့ ရငေုပျသင်ျဘောတို့ ဒီလိုမြိုး စဈရေးရာမှာလညျး သုံးတာပေါ့။ နောကျပွီးရငျ လအေားလြှပျစဈလုပျရာမှာလညျး သုံးတယျ ။ လြှပျစဈကားတှမှောလညျး သုံးတယျ ဆိုတော့ သူက အသုံးပွုတာကတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မွရှေားက အမွဲပဲ လိုအပျနမှောပဲ။”
မေး။. ။“ဆရာ ဒီပနျဝါမှာ တှတေဲ့ အမြိုးအစားက အဓိက ဘာသုံးတာပါလညျး။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ပနျဝါမှာ တှတေဲ့ အမြိုးအစားကတော့ ဂကျြတိုကျလယောဉျ လုပျရာမှာ သုံးတယျ။ နောကျ လြှပျစဈကားတှေ ထုတျတဲ့နရောမှာ သုံးတယျ။ အဓိက ကတော့။ နောကျပွီး လအေား လြှပျစဈလုပျရာမှာလညျ သုံးတယျ။ ပနျဝါက သူက လေးတဲ့မွရှေား ဆိုတော့ သူက တနျဖိုးလညျး ကွီးတယျ။”